I-Icasa empini yokuqeda ukuphelelwa yisikhathi kwama-data | isiZulu
I-Icasa empini yokuqeda ukuphelelwa yisikhathi kwama-data
U-MTN uyavuma ukuthi ama-data abiza kakhulu kwabahlwempu
Kumele yehle intengo yama-data - Icasa
UNgqonqoshe ufuna isukunyelwe eyokubiza kwama-data kuleli
Johannesburg – Inhlanganano elawula ezokuxhumana kuleli, i-Independent Communications Authority of South Africa (Icasa), ihlose ukulawula ukuphelelwa yisikhathi kwama-data (data expiry), ngokwesaziso esishicilelwe kwi-Government Gazette ngoMsombuluko.
Le nhlangano ifuna ukuchibiyela imithetho ye-End-user kanye neSubscriber Service Charter Regulations ngokuthi yethule uhlelo lokukhokhela ama-data lwabantu abangenazo izinkonteleka kanye nokunye ukwenzekayo ngokuphelelwa isikhathi kwama-data.
OyiDirector of Technology enkampanini yezokuxhumana, i-ENS Africa, uWilmari Strachan, uthi le mithetho izolawula isikhathi ama-data okumele asihlale esasebenza ngaphambi kokuba aphelelwe yisikhathi.
OLUNYE UDABA: U-MTN uyavuma ukuthi ama-data abiza kakhulu kwabahlwempu
“Isibonelo, ama-data bundles ka-1GB kuya ku-5GB kumele aqhubeke asebenze kuze kuphele izinsuku ezingu-90. Ama-data bundles amakhulu anjengano-20GB kanye nangaphezulu, kumele aqhubeke asebenze izinyanga ezingu-24 montshs.”
Lo mthetho uphinde unikeze ithuba umuntu osebenzisa ama-data ukuthi akwazi ukuzikhethela ukuthi ufuna ukuqhubeka nokusebenzisa ama-data akhe ngaphambi kokuba aphelelwe isikhathi.
Umphakathi unesikhathi kuze kube uSepthemba 2019 ukuze ufake ukuphawula kwawo.
Ngaphambilini i-Icasa yamemezela ukuthi izoqala uphenyo ukuze kuncishiswe intengo yama-data emba eqolo kuleli. Lolu phenyo luzohlukana izigaba ezine kanti luzoze luphothulwe ngoMashi 2018.
'Isikweletu sika-R1bn sokudla sakwaPnP sitshengisa ukushuba kwesimo somnotho'
Ezinye izindaba... Ezamabhizinisi...
Isikweletu sika-R1bn sokudla esenziwe amakhasimende kwaPick n Pay siyizinkomba zokushuba kwesimo somnotho kuleli yingakho abantu sebeguqukela ekukweleteni ukudla ukuze bondle imindeni yabo.
#BusStrike: Ziphinde zafinyelela kwangqingetshe izingxoxo
Azihambanga kahle izingxoxo phakathi kwezinyunyana kanye nomqashi eBargaining Council mayelana nesiteleka samabhasi kuzwelonke njengoba ziphinde zafinyelela kwangqingetshe.
'Ukwenyka kwe-VAT kuzobahlomulisa abantu bakuleli esikhathini esizayo'
Njengoba amakhasimende enxenxwa ukuba azame ukonga imali kulandela ukwenyuka kwentela eyengeziwe (VAT), iSouth African Revenue Service (Sars) ithi ukwenyuswa kwayo kuzobahlomulisa kakhulu abantu baseNingizimu Afrika esikhathini esizayo.
UJacob Zuma unengane nowesifazane, 24, okubikwa ukuthi uzoshada naye
Jhb: 10-23°C Bloem: 5-23°C
Fourways - 20:13:17 PM TRAFFIC LIGHTS not working at Monte Casino Boulevard Ezinye zasemigwaqeni